कानून संकायतर्फको परीक्षाफल सार्वजनिक ! अनलाईनबाटै हेर्न सकिने - Everest Dainik - News from Nepal
कानून संकायतर्फको परीक्षाफल सार्वजनिक ! अनलाईनबाटै हेर्न सकिने
काठमाडौं, वैशाख ६ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले परीक्षाफल प्रकाशित गरेको छ । कानून संकाय तर्फको स्नातकोत्तर तह तेस्रो वर्षको परीक्षाफल प्रकाशन गरेको त्रिविले जनाएको छ ।
कानुन संकायमा उच्च तहसम्म अध्यन गर्ने विद्यार्थीहरुको संख्या कम देखिएको छ । परीक्षामा जम्मा ६३ जनाले भाग लिएकोमा २३ जना उर्तीण भएका छन् । जुन आधाभन्दा पनि धेरै थोरै हो । परीक्षाफल हेर्नको लागि यहाँ थिच्नुहोस्
याे पनि पढ्नुस स्नातक तह प्रथम वर्षको परीक्षा फेरि सर्यो